Ikhasi Lasekhaya | i-Joko itiye lase Ningizimu Afrika
Yini ongathanda ukuyazi?
Sonke sineqhaza esingalibamba
Okungamaqiniso Okuyisisekelo ngokuphathelene Nokuhlunyezwa Kwabesifazane
Ukuyekisa ukuthula KWABO
Ukwenza uhlelo lokuphepha
Inhlangano engakusiza (ama-NGO)
Yini udlame olubhekiswe kwabobulili obuthile?
IZINCWADI EZINIKA AMANDLA
AMAVIDIYO ANIKA AMANDLA
Thola ulwazi nge-COVID-19, sicela uvakashele ku: www.sacoronavirus.co.za
Siyabonga ngokuzibophezela ngokusiza. Siyabonga ngokuthi usivakashele kilewebhusayithingisho kuthiwa ufuna ukuzofunda kabanzi ngodlame lwesekhaya, uzothenga itiye le-jokoukuze ulekelele ukuvikela kuPOWA, noma mhlawumbe uzoshiya umyalezo wakho wokukhuthaza laba abahlukumezekayo abadinga ukukhuthazwa nokuqiniswa, siyaziqhenya ngawe. uliqhawe langempela kulomkhankaso wokulwisana nokuqeda ukuthola ngaloludlame
Njengetiye elinika amandla, i-Joko ifuna ukusiza abesifazane basesizweni sethu ukuthi basebenzisa amandla abo ekukhulumeni ngalokhu. Ungasiza othile ukuthi abe naleyo ngxoxo yokuqala engelula.
Sibambisene ne-POWA (People Opposing Women Abuse), Inhlangano yaseNingizimu Afrika Engekho Ngaphansi Kukahulumeni elwela amalungelo abantu besifazane futhi ehlinzeka ngezinsiza ezifana nezindawo zokukhosela, ukwelulekwa kanye nokwelulekwa ngokuphathelene nomthetho kwezisulu zokuhlukunyezwa. Abesifazane kanye nezingane eziyi-60,000 eziyizisulu zodlame olwenzeka ekhaya eNingizimu Afrika, sinethemba lokulwa lesi sihlava sodlame olukekelwe ebulilini.**
**2015, World health Organisation.
Zitholele kabanzi ngalemniningwane
I-Joko inikela ngo-R1 wephakethe ngalinye le-Joko 100s ku-POWA (People Opposing Women Abuse) ukuze isize ukwakha izindawo eziphephile lapho izisulu zodlame olwenzeka ekhaya zingakhuluma khona ngalokhu, futhi ziqede udlame.
Thola kabanzi ukuthi ungaziqaphela kanjani izimpawu zaloludlame, Zinikele akusizeni.ukwazi umehluko kungaqala ngawe.
Cindezela lana ukuze ubhale
Thola ukuthi abesifazane banqobe kanjani udlame lwasekhaya.
Ngokubambisana singabasiza labantu besifazane. Nikela namhlanje.
Lesi sizindalwazi siphokophele ukusiza bonke labo abathintekile ngokuphathelene nodlame olwenzeka ekhaya ngokubahlinzeka ngolwazi olubalulekile olusebenza emhlabeni wonke. Qaphela ukuthi okunikelwayo kusetshenziswa ezikhungweni ezingaphakathi eNingizimu Afrika.